- Manga : Teny ny fandraharahana ;
- Manga mazava : teny koltoraly ;
- Maitso : mpiteny frantsay hafa.
Ny fiteny frantsay dia fiteny ao amin'ny vondron'ny fiteny rômana, vondrona isian'ny fiteny rehetra avy amin'ny fiteny latina taloha (espaniola, italianina, sns.) tenenina any Frantsa (na dia any ampitandranomasina aza), tany niaviany, any Belzika (any Valônia ary any Bruxelles), any Monaco, any Kanada (Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick) ary any Soisa rômanda (anisan'ny teny ofisialin'i Soisa ny fiteny frantsay). Ahitana mpiteny frantsay koa any Etazonia (ao Louisiane indrindra indrindra), any Haïti, any Seisela, any amin'ny Nosy Maorisy, any Vanuatu ary any Italia (Val d'Aoste). Betsaka koa ireo mpiteny frantsay avy any Afrika, indrindra indrindra ao amin'ny zanatany frantsay taloha (Afrika Andrefana Frantsay, Afrika Ara-pehibe Frantsay, Madagasikara).
Ny fiteny frantsay dia fiteny faharoa na fahatelo be mpiteny indrindra manerana izao tontolo izao, ohatra ny any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, firenena be mponina indrindra manerana ny frankôfônia ary anisan'ireo firenena 29 mampiasa ny teny frantsay ho teny ofisialy irery na ofisialy miaraka, ny ankamaroan'ny firenena ao Afrika Andrefana. Ireo firenena ankehitriny mampiasa ny fiteny frantsay ireo dia zanatany frantsay ary beljianina taloha. Vitsy ihany ireo olona nibe tamin'ny fiteny frantsay any Afrika, indrindra any Côte d'Ivoire na any Gabon ; ireo olona ireo dia matetika mipetraka eny ambonivohitra.
Any Frantsa, ny fiteny frantsay dia anisan'ny marika ny maha-frantsay : teny frantasy no teny ofisialin'ny Repoblika frantsay (andininy faharoan'ny lalampanorenan'ny 1958). Fitaovana iparitahan'ny kolontsaina frantsay manerana izao tontolo izao koa io fiteny io. Manana fikambanana manan-tanjona mampana-boambolana frantsay koa ny fiteny frantsay, tamin'ny didi-panjakan'ny 3 Jolay 1997 mahakasika ny fampanana-boambolana ny fiteny frantsay.
Ny isan'ny mpiteny frantsay manerana izao tontolo izao dia 220 tapitrisa eo ho eo, 72 tapitrisa amin'ireo no mahaihay miteny frantsay (fanakaikezaana nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ny Frankôfônia : 2010), teny fahaenina be mpiteny indrindra ny fiteny frantsay. Anisan'ny teny ofisiany enina an'ny Firenena mikambana (miaraka amin'ny fiteny anglisy) ary teny ofisialy na teny fiasan'ny fikambanana iraisam-pirenena na fikambanam-pirenena. Noho izy teny ofisialin'i Frantsa, firenena mpikamban'ny Vondrona Eoropeana, teny ofisialin'ny Vondrona Eoropeana koa ny fiteny frantsay.
Talohan'ny Ady lehibe voalohany, teny fiasan'ny fianankaviana manjaka any Eoropa ny fiteny frantsay ; ary fiteny ampiasain'ny diplômata rehefa mihaona.
teny frantsay manerana izao tontolo izao